Otú nyefee Data si HTC ka iOS Devices
iOS ngwaọrụ na-mara ha ịke na klas. Gịnị ka ị na-eme ọ bụrụ na ị na-eche echiche ka ịgbanwee gaa na ihe iOS ngwaọrụ site na a HTC ekwentị ma amaghị otú nyefee data? Nyefee data site na otu ekwentị ọzọ nwere ike ịbụ na-ewe oge. Ekele, e nwere ụfọdụ mfe ụzọ si.
Issues banyere ibuga data si HTC ka iOS Devices
Ọ bụrụ na ị na-eji a ekwentị dị ka HTC, ọ pụrụ isi ike ka ịgbanwee gaa na iOS dị ka data transfer adịghị mfe. HTC igwe-agba ọsọ na Android OS na ndị niile data bụ nanị dakọtara na Android. Ọ bụ ezie na e nwere ụzọ nyefee ma ị ga-rụrụ dị iche iche nzọụkwụ nyefee dị iche iche data. Ọ bụrụ na ị na-enyefe data si HTC ka iOS ngwaọrụ, ebe a bụ mbipụta na i nwere ike na-eche ihu:
1. Ndi ana-akpo-apụghị dị ka iPhone si ihe gam akporo ngwaọrụ ka ha na-synced ka Google Akaụntụ. The iOS ngwaọrụ mmekọrịta ka iTunes akaụntụ.
2. App data apụghị-agafere dị ka Android na iOS abụọ kpamkpam dị iche iche ngwaọrụ. Ị ga-wụnye ihe iOS version nke ndị a ngwa.
3. kalenda gị, ozi, ọrụ nwere ike ghara synced ka ndị dị iche ngwa jikwaa a data ụdị.
4. Ị ga-enwe nyefee gị data ka PC na nyefe iOS ngwaọrụ. Ọbụna na usoro a, ka zuru ezu data mmekọrịta na-adịghị mbo ihu.
Iji nyefee data, ị ga-mkpa mgbe nile ọzọ software na ike eme ihe dị ka intermediator n'etiti abụọ dị iche iche ngwaọrụ. Best software na bụ Wondershare MobileTrans.
Ngwọta dị mfe: 1 Pịa nyefee data si HTC ka iOS Devices
Ọ dị mfe nyefee data n'etiti abụọ ngwaọrụ ma ọ bụrụ na i nwere software dị ka Wondershare MobileTrans. MobileTrans Dị ukwuu software na pụrụ inyere gị nyefee data n'ime nanị otu click!
MobileTrans Bụ data transfer software mepụtara Wondershare, onye na-mara maka ya mobile ịba uru software. Ya-enye gị nyefee data si HTC ka iOS ngwaọrụ nanị otu click. The software nwere ike mfe nyefee data ụdị dị ka kọntaktị, ozi ederede, audio, video, kalenda, ngwa, foto na oku na ndekọ. Ọ bụ zuru ezu n'ihe ize ndụ-free na-elekọta nzuzo gị. Ọ na-akwado dị iche iche sistem. Lee ndị isi atụmatụ nke MobileTrans:
1. Software akwado Android, Windows, iOS, na Nokia Symbian. Ọ maara na-arụ ọrụ n'ihi na ihe karịrị 3000 smartphones n'elu dị iche iche na netwọk.
2. Iji a software i nwere ike ndabere ọdịnaya gị ma weghachi ya na mbụ mma.
3. Bụrụ na ị chọrọ ihichapu ekwentị data maka arụmọrụ ma ọ bụ resell ihe mere, dị na-eji nke a software na ekwentị ga-tọgharịa ụlọ ọrụ ntọala.
4. Iji software dị mfe na-ewe nanị ole na ole sekọnd ruru ya kensinammuo interface.
Nduzi na otú nyefee data si HTC ka iOS iji MobileTrans
MobileTrans Nwere nnọọ mfe usoro nke-ebufe a mgbagwoju anya data. Dị nnọọ download software si Wondershare saịtị. E nwere nzọ ụkwụ version na a zụọ version na zuru atụmatụ. The software dị maka ma Windows na Mac OS, otú ibudata dakọtara software maka PC gị. Dị ka ị ga na-ebufe mwute data, jide n'aka na ị na-agụ akwụkwọ ntuziaka maka ozi. Lee ndị isi chọrọ maka usoro a:
3. Eriri USB nke ma igwe.
Malite software na kọmputa gị. Ugbu a gaa-acha anụnụ anụnụ acha na pịa ya. Ọ bụ ekwentị na ekwentị transfer nhọrọ.
Ugbu a jikọọ gị ma igwe na iji eriri. Cheta, na-eji nanị emeputa nyere USB cables kacha mma Njikọta. Chere maka software ịchọpụta gị ntị.
Ị pụrụ ịhụ na nwoke ụdị mgbe software na-achọpụta rụọ ha. Otú ọ dị, jide n'aka na Isi Iyi bụ gị HTC ekwentị na Destination bụ gị iOS ngwaọrụ. Ugbu a gaa n'etiti panel na họrọ data ụdị ị chọrọ nyefee. Ị pụrụ ịhụ nhọrọ dị ka kọntaktị, ozi ederede, kalenda, oku na ndekọ, ngwa, photos, music, na vidiyo.
Ugbu a pịa Malite Copy, data ụdị na i ticked ga-agafere. Ị pụrụ ịhụ ọnọdụ nke data transfer on a na-enwe ọganihu window. Oge iwere ga-gosiri. Size nke data ga-ekpebi na-eme atụmatụ oge.
Mgbe nyefe zuru ezu, wepụ USB cables na ego ị iOS ngwaọrụ. Gị HTC data ga-ugbu a synced ka iOS ngwaọrụ. Jiri iche ngwa ka ịnweta data. Ị nwere ike ozi ọzọ na software si ukara saịtị.
Nke iOS ngwaọrụ ị na-eji na US?
The iOS na ngwaọrụ ndị na-ewu ewu na US. Apple kere a nnukwu ofufe isi ke US n'ihi na ya ebube na ngwaahịa. Ha na ngwaahịa na-ahụta ka ala nke Art ngwaọrụ. Ha mgbe niile nwere ọhụrụ ngwaọrụ na-enye na ọhụrụ ọ bụla tọhapụ. Ya mere nke iOS ngwaọrụ Ị na-eji ugbu a?
Nhọrọ 1: iPhone 6s (Plus)
Nhọrọ 2: iPhone 6 (Plus)
Nhọrọ 3: iPhone 5s
Nhọrọ 4: iPad Air 2
Nhọrọ 5: iPad Air
Nhọrọ 6: iPad Obere 2
Nhọrọ 7: iPad Obere 3
Nhọrọ 8: iPad Obere
Nhọrọ 9: iPhone 4s
Nhọrọ 10: iPhone 4
Ị nwere iPhone 6S ma? Dị nnọọ bulie ọ bụla iOS ngwaọrụ, na ị na-n'aka-enwe mmasị na ya. Ịmafe iOS ga-eleghị-kasị mma nzọụkwụ ị nwere ike na-n'ihi na gị mobile Mgbakọ mkpa. Nghoputa maka kasị mma iOS ngwaọrụ ị na-eji.
Otú nyefee Data si iOS Devices ka LG ekwentị mkpanaaka na
Olee otú Zọpụta Facebook ozi Ozi na iOS
Olee otú Naghachi Lost Photos mgbe upgrading ka iOS 7/8/9
> Resource> iOS> otú nyefee Data si HTC ka iOS Devices